Izinga lokushisa elifanele lefriji nesiqandisi | Bezzia
Izinga lokushisa elifanele lefriji nesiqandisi
UMaria vazquez | 10/05/2022 12:00 | Ukupheka
Eminyakeni emibili edlule sabelana eBezzia izihluthulelo zoku ube nekhishi elisebenza kahle kakhulu. Sabe sesikhuluma ngokubaluleka kwakho kokubili ukusebenza kahle kanye nokusetshenziswa kahle kwezinto zikagesi, sibala ifriji ekahle kanye nezinga lokushisa lesiqandisi.
Namuhla siqhubekela phambili kancane ngokuhlaziya ukubaluleka kwalokhu kushisa okuncike kukho, hhayi nje kuphela ukugcinwa kokudla, kodwa ukonga esikweletini sikagesi. Uyafuna ukwazi ukuthi yiliphi izinga lokushisa okufanele usethe isiqandisi noma isiqandisi sakho uma sifakiwe?
1 Ukubaluleka kwezinga lokushisa elifanele
2 Izinga lokushisa elifanele
2.1 Ngililungisa kanjani izinga lokushisa?
Ukubaluleka kwezinga lokushisa elifanele
Ukupholisa kudala a ukukhula kancane kwama-microorganisms njengamabhaktheriya ayengatholakala ekudleni, ukukugcina esimweni esihle sokuphepha ukuze kudliwe. Indaba ebalulekile ngokwanele ukuba inakwe, awucabangi?
Ukukhetha izinga lokushisa elilungile kuzokuvumela ukuthi ulondoloze ukudla okusha isikhathi eside kanye/noma isesimweni esihle. Kanjalo ngeke unciphise izingozi ezitholakala ekusetshenzisweni kwayo kuphela kodwa nokumosha ukudla. Futhi cha, hhayi njalo ukukhetha izinga lokushisa elibanda kakhulu ukuthi imishini isivumela, kuyisinqumo esingcono kakhulu. Kungenzeka ukuthi uchitha amandla kungenasidingo futhi ubangele ukudla okuthile konakale ngokushesha.
Iziqandisi neziqandisi zibalelwa kuze kufike U-22% wesamba sezindleko zikagesi wamakhaya ngokwe-IDAE aze afike ku-31% ngokwezifundo ze-OCU. Ingabe izinto ezidla amandla amaningi, njengoba bekwenza njalo. Futhi i-degree Celsius ngayinye esehlisa i-thermostat yakho ingasho izindleko ezengeziwe zikagesi eziphakathi kuka-7 no-10%. Iphesenti elizoholela ekwenyukeni kwezindleko ekupheleni kwenyanga.
Lezi yizinto zikagesi ezidla kakhulu
Izinga lokushisa elifanele
Ngokusho kochwepheshe kanye nezincomo zabakhiqizi la izinga lokushisa eliphezulu lesiqandisi cishe ku-4°C. Nakuba befaneleka ngokuhluka okuncane okungaba phakathi kuka-2 no-8 degrees, kuye ngokuthi ifriji ayinalutho noma igcwele kangakanani. Futhi ukuthi ukuze ukudla kugcinwe futhi isiqandisi sisebenze kahle ngaphezu kokugcina izinga lokushisa elifanele, kunochungechunge lweziqondiso okufanele uzilandele:
Gwema ukwethula ukudla okushisayo; njalo uwayeke aphole ngaphambi kokuwagcina kuwo.
Ungaligcwalisi yonke indlela, ukuvumela ukujikeleza kwamahhala komoya obandayo. Futhi uma wenza kanjalo, yehlisa izinga lokushisa ngedigri eyodwa.
gcina njalo ukudla okufakwe emasakeni noma iziqukathi ezingangeni moya.
Hlola isiqandisi masonto onke futhi ususe ukudla okungasekho esimweni esihle.
njalo kugcine kuhlanzekile, ukususa noma yiluphi uhlobo loketshezi okungenzeka luchithekile.
Ngakolunye uhlangothi, izinga lokushisa elikahle lefriji iphakathi kuka -17°C noma -18°C. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukwazi ukuthi ukuze ama-parasites angenzeka (afana ne-Anisakis ezinhlanzi noma i-Toxoplasma gondi enyameni) angabeki ingozi yezempilo, kuzodingeka ukuthi umise ukudla okungenani izinsuku ezingu-5 ngaphambi kokusetshenziswa.
Ngililungisa kanjani izinga lokushisa?
Kuvamile ukuthi lapho sithenga isiqandisi, beza, basifakele futhi sikhohlwe ukuhlola izinga lokushisa futhi silungise uma kunesidingo. Eziqandisini zesimanje kakhulu kanye/noma ezisezingeni eliphezulu, lokhu kusebenza kungenziwa ngokusebenzisa izilawuli zedijithali. Ngokuvamile lezi zitholakala ngaphambili noma emnyango wesiqandisi. Iziqandisi ezindala noma ezisezingeni eliphansi, nokho, azinazo lezi zilawuli futhi zifihla isondo lokulawula ngaphakathi.
La isondo lokulawula Inezinye izinkomba ezisivumela ukuthi silawule izinga lokushisa. Lezi zinkomba ngokuvamile ziyizinombolo ezisuka ku-1 kuye ku-7 noma ku-1 kuye ku-10 ezingahlobene ngokuqondile nezinga lokushisa kodwa nezinamandla (lapho inani liphezulu, libanda kakhulu). Kulezi zimo, okuwukuphela kwendlela yokwazi ukuthi iyini izinga lokushisa ngokubeka ithemometha esiqandisini futhi udlale ngesondo size sisondele kulokho kushisa okufanelekile.
Ubuwazi ukuthi izinga lokushisa elikahle lesiqandisi nefriji laliyini? Ingabe uzobuyekeza futhi ubuyekeze izinto zakho zikagesi ngemva kokufunda lesi sihloko?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Ukupheka » Izinga lokushisa elifanele lefriji nesiqandisi
Izintandokazi ezinkulu zokuwina i-Eurovision 2022
I-Mascarpone nekhekhe lemon